Njengomthetho, abesifazane abaningi abanalo isikhathi esanele sokunakekelwa kwesikhumba sabo njalo, ngakho-ke ikhambi elilodwa eliza ekuhlanguleni, baya salon beauty, ukuze ochwepheshe ngokushesha babuyele intsha elahlekile. Kuye ngesimo sesikhumba noma izinkinga zesikhumba esikhona, ngokuvamile kuvame ukwenza izinqubo eziningana ngonyaka wokugcina isikhumba sakho esimweni esivamile.
Ukuhlolisisa okubuyiselwayo - lokhu kuyindlela efanayo, okumelwe yenziwe izikhathi ezingu-2-3 izinyanga eziyisithupha. Ngaphezu kokuthi le nqubo iwusizo kakhulu futhi isebenza kahle ekuvuseleleni nasekutholeni, ngoba isasebenza isikhumba. Ukuze kusetshenziswe, i-retinoic acid isetshenziswa, okuyinto eyinhloko, kodwa ezinye izinto zengeziwe. I-amino acid iphuzi futhi ku-salons amaningi ibizwa ngokuthi "ukuphuzila okuphuzi".
Le nqubo ihlukaniswa njengendlela yokwehla kwemiphumela yamakhemikhali kanye nemiphumela emaphakathi. Yebo. imisebenzi yayo eyinhloko iqondiswe ezigabeni ezimbili zesikhumba, ezibhekene nezinguquko zesikhathi eside ezibukwayo, ukuxhaswa, imibimbi. Lokhu kukhishwa ngokuphumelelayo kukuvumela ukuthi ulindele ukubukeka kwama-orchid, kodwa okubaluleke nakakhulu, kususa imibimbi engazalwa kalula.
Ukucubungula okubukeka ngokuphindaphindiwe kubhekwa njengenqubo emnene, ngenxa yalokhu kuhlanganiswa kungasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zesikhumba ngaphandle kokungafani, lokhu kufaka isikhumba esicindezelayo noma esinomile. Inqubo yenziwa eduze kwamehlo, endaweni ye-décolleté, esikhunjeni sentamo nakwezinye izindawo lapho isikhumba esibucayi khona.
Ukubheka okuphuzi kunamanye amabili amakhulu:
ngokusetshenziswa kwe-retinol yemvelo, itholakala esitshalweni semvelo esiyingozi i-Urukum, eshiywa ngaphandle futhi sinikeze ijusi;
futhi futhi ngokusetshenziswa kwezinto zamakhemikhali, zidalwe ubuciko ngokusebenzisa i-retinoic acid, kodwa kuphela umvelaphi wokwenziwa.
Uma wenza inqubo nge-chemical retinoic acid, lokhu kubangela ukuvuthwa okujwayelekile komphumela womphakathi. Kulesi simo, naphezu kokuthi le nqubo ilula, isikhathi sokutakula sizodingeka izinsuku ezimbalwa, ngokuvamile izinsuku ezintathu noma izinsuku, kodwa azikho izinzwa ezibuhlungu noma izinkinga.
Uma uhlolisisa i-nitinol yemvelo, khona-ke umphumela ngokuvamile unobumnene futhi unomusa, uthinta ungqimba ongaphezulu. Ukubheka okunjalo kungenziwa kaningi, ngaphandle kokuthi isikhathi sokutakula asikho. Futhi futhi kufanele uqaphele inzuzo, lolu hlobo lokucubungula lungenziwa kunoma iyiphi inkathi yonyaka futhi elingenamkhawulo yobudala, nakuba izincomo zithi lokhu kuhlolisiswa kusetshenziselwa abesifazane abaneminyaka engama-35 ubudala. Eqinisweni, akuyona nje ingozi, kodwa kuyasiza abesifazane abasha abaneminyaka engu-25 ubudala, ngoba ngisho nangalesi sikhathi abanye abantu bathola imibimbi yokuqala.
Isenzo se-acino retinoic esikhumbeni
I-Retinoids futhi le-acti yenza esikhumbeni ngekhwalithi ye-vitamin A cishe yonke into ebonakala efana nayo, kodwa nayo inezimfanelo zayo. Ngenxa yalomphumela, ukushintshaniswa kwesitokisi okunamandla kuthuthukisa, futhi kubalulekile ukuphawula ukuvuselela okunamandla kwazo zonke izinqubo-oxidation nezinqubo zokunciphisa. Konke lokhu kunomthelela ekwenzeni izinto eziningi ezifana ne-elastin ne-collagen, i-epidermal lipids ivuselelwa ngokushesha. Ngenxa yalokho, izinqubo zokuvuvukala zanyamalala esikhumbeni, ngaphezu kwalokho, isikhumba sivikeleka ngokuqinile emidlalweni yama-radicals emazayo.
Njengoba sekushiwo kakade, amanye amavithamini nezinto ezitholakala ekubunjweni kwe-peeling: i-azelaic acid, i-ascorbic ne-kojic, i-phytic. Wonke lawa ma-acids aqinisa futhi athuthukise isenzo se-acino retinoic,
ukuthuthukiswa kwegazi ngezimpahla zesikhumba;
ukusheshisa ukuvuselelwa kwamaseli;
susa izingulube ezibonakalayo esikhumbeni (hyperpigmentation);
amaprotheni synthesis nawo athuthukisiwe.
Izinkomba ze-Piping Ephuzi
Ukucubungula okuphuzi kunconywa kakhulu kubo bonke abesifazane ukuqeda izinguquko zesikhumba ezihlobene neminyaka, kanye nesikhumba esinenkinga. Lokhu kuncibilikisa kunomthelela omkhulu wokuphakamisa, okwenza kwenzeke: ukungena emigqeni ephakathi yesikhumba ukuze ubusheleleze imibimbi nemifino, yebo, hhayi ekupheleni, kodwa izimbali ezincane zikhishwa ngaphandle kokulandelana. Kumele futhi kuqaphele ukuthi i-retinoic acid ithuthukisa ukuthungwa kwesikhumba, ikhulise i-turgor nokuqina, igcizelela ukukhululeka kwesikhumba futhi yenza isikhumba sidle.
Ukusebenzisa ukucubungula nge-retinoic acid, unga:
ukuqeda izibonakaliso eziningi ze-sebostatic esikhumbeni, isibonelo, ukunciphisa noma ukunciphisa izindawo zokuvuvukala, uhlanza isikhumba sama-abscesses bese ufaka ama-comedones;
futhi kuqede izinkinga ezihlukahlukene nge-hyperpigmentation. Lokhu kungabonakala masinyane emva kweseshini eyodwa, lapho amabala e-pigment elahlekelwa umbala wawo okhanyayo, futhi ngokuhamba kwesikhathi angancishiswa ngokuphelele;
Kubesifazane abanezinkinga nge-hyperkeratosis, ngokoqobo iseshini esifanayo isusa ingxenye enkulukazi yesikhumba, ubukhulu besikhumba buyancipha, i-epidermis ithola ukubukeka okusha nokuphilile.
Le nqubo yokuhlunga inezinkomba zayo, yize izingxenye zinomthelela omnene futhi omnene esikhumbeni. Phakathi kwezingqinamba kukhona:
izifo ezinzima ze-hepatic;
ngesikhathi se-lactation noma ukukhulelwa;
uma i-retinoids ithathwa;
ngenxa yezimpi ezindiza;
ngesikhathi sokuqhathaniswa kwezifo zesikhumba;
phambi kwezifo zesikhumba ezingapheli;
ukubekezelelana ngabanye izingxenye zokucubungula.
Isigaba sokulungiselela ukuhlunga okuphuzi
Naphezu kokulula kwenqubo, njengezinye izinqubo eziningi zokuzithokozisa, ukuze kusetshenziswe ngokuphumelelayo kubalulekile ukulungisa isikhumba kusengaphambili. Inqubo yokulungiselela ilondoloza okungenani amasonto amabili, lapho isikhumba silungiswa ngosizo lwamanye amapelisi athambileyo, isibonelo, i-enzyme kanye nezithelo-acid. Lezi zinqubo azitholakali njalo, amasonto amabili, izinqubo ezimbili kuphela ezenziwa, ngenxa yalokho, isikhumba sithola isimo esifanele sokuziphatha kwe-yellow peeling.
Uma ukulungiswa okunjalo kwenziwa yi-cosmetologist, khona-ke ama-acids akhethekile ahlukahlukene kanye nama-gel ane-glycolic acid asetshenziswa. Le ndlela ikuvumela ukuba ususe emigqeni yesikhumba esikhumba, isikhumba sinciphisa futhi sivumela i-retinoic acid ukwenza isenzo sayo ngokuphumelelayo kakhulu. Kodwa uma ufisa, ungakwazi ukufeza isigaba sokulungiselela ekhaya, ngoba lokhu kudingeka usebenzise ama-gel, okuyinto, njengoba kubhaliwe ngenhla, aqukethe i-glycolic acid. Futhi kufanelekile ukwazi ukuthi isonto ngaphambi kokuqala kokubheka ukuthi awukwazi ukusebenzisa izimonyo ngomphumela wokukhipha imfucuza, udinga ukulahla izinqubo ze-solarium illazernyh, futhi uzame ukugwema ukukhanya kwelanga okuqinile.
Okuyisisekelo sokubheka nokuncoma
Ngaphambi kokuqala ukucubungula, isikhumba sibhekene nokuhlanza ngokuphelele bese i-beautician iqala isigaba sokulungiselela. Iqukethe ukusebenzisa isikhumba se-glycolic ne-salicylic acid, kanye ne-resorcinol ne-chitosan. Emva kwalokhu kulungiselelwa, isikhumba sizobe sesilungele ukuqala kokusetshenziswa kokubheka i-retinoic acid.
Ukubunjwa kusetshenziswe esikhumbeni kungabi ngaphezu kwemizuzu engama-20, kuye ngokuthi isikhumba, ukuzwa nokushaywa kwemizwa kungavela, kodwa akunamandla futhi kudlula ngokushesha. Ngemuva kokuphela kwenkambiso, i-asidi ingathathi isisombululo esikhethekile, bese ihlanzwa ngokuphelele.
Ngemuva kokuthi ukuhlanzwa kuhlanjululwe, isikhumba sithola ukuzwa okungenakukhanya kokukhanya, kuba bushelelezi kakhulu, kuphenduka i-pink, ngaphandle kokusebenzisa ama-creams okufisa amanzi kanye namaski okuzivikela. Kungenxa yalokhu ukuthi isikhumba sosuku olulandelayo siqinisiwe futhi ukucubungula kuqala, ngakho-ke kungaba izinsuku ezingu-3-4. Ngalesi sikhathi, amafomu okunyusa ama-enzyme kufanele asetshenziswe. I-Nestoit isebenzisa ama-compounds ukusheshisa ukucubungula, vumela isikhumba ngokwemvelo ukuba senqabe ungqimba olungadingekile. Ngemuva kwesonto uzobona imiphumela yesizukulwane, imibimbi encane iyoshabalala kuqala, khona-ke imibimbi izoqala ukubhebhetheka, kanye nokunyamalala kwamabala amaningi e-pigment. Ukuzwa okuthakazelisayo kokuqina futhi isikhumba sokuvuselelwa.
Le nqubo izokwanela izinyanga eziyisithupha, noma kunjalo, ukuthuthukisa nokuhlanganisa umphumela, udinga ukwenza izinqubo ezinjalo ezingu-2-3, umahluko wamasonto amabili. Ngesikhumba nge-pigmentation eqinile, kutuswa ukunciphisa inani elangeni elinamandla.
Izincomo ezisuka kumtholampilo we-OTTIMO
I-Paraffinotherapy ebusweni nasesandleni isikhumba ekhaya
Izinzuzo nokuqeda ukuthungulwa kwe-salon
I-Amoveo Spa - i-spa engcono kakhulu yokuthokozisa nobuhle
Wedding, usuku lwesibili, ubambe
Isinkwa sezinyama "ezimibalabala"
Izimfihlo zabesifazane abaphumelelayo
Ilokhi likaKhisimusi logijimi
Ukwelashwa kokudla ngesikhathi sokukhulelwa
Isaladi yenhliziyo yenkukhu
33 kumnandi: ukudla, ukulala, ucansi, umsebenzi, ukuphumula
Kulich isitayela esidala saseRussia
Isinkwa ngesokisi, inkukhu kanye no-anyanisi aluhlaza
USergey Shnurov uyokwenza uthando ku-Channel One
Izinkinga eziqhubekayo emsebenzini
Uzoya kuphi ukuphumula ebusika?
Izisulu. Izimpawu. Ukwelapha